ဆုံလည်ရေချိုးခန်း Faucets Brush နီကယ်
ပင်မစာမျက်နှာ / ရေချိုးခန်း Faucets / ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ Pop-Up ရေနုတ်မြောင်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် / WOWOW Centerset ရေချိုးခန်း Faucet
Pop-Up ရေနုတ်မြောင်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူ WOWOW Centerset ရေချိုးခန်း Faucet
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 4.855ထဲကအပေါ်အခြေခံပြီး 26 ဖောက်သည် ratings
centreset ရေချိုးခန်း faucet အသေးစိတ်ကို:
4-in စင်တာနေရာအရပ် bracket က
2321400 installation ကိုညွှန်ကြားချက်
သင်္ဘောစုပ် ၂၃၂၀၄၀၀ အတွက်ရေချိုးခန်း faucet သည်ဘယ်သောအခါမှတည်ငြိမ်သောပြproblemsနာများကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အကုန်လုံးဖြင့် Electroplated, ရေစုပ်များအတွက်ရေချိုးခန်း faucet ဘယ်တော့မှအောက်စီဂျင်ရရှိသွားတဲ့။
အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော Push & Seal Pop-up ရေနုတ်မြောင်းများစုဆောင်းခြင်းနှင့် cUPC လိုင်စင်ရ faucet များဖြန့်ဖြူးသည့်ပိုက်များပါ ၀ င်သည်။
မြင့်မားသော arc spout သည်စုပ်ယူမှုသို့ပိုမိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာရရှိစေနိုင်သည်။
ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်မှုအတွက် ၄ လက်မစင်တီမီတာအဆင်အပြင် ၃ ခုအပေါက်ပါသောကွင်းခတ်။ အပေါက်အရွယ်အစား: 3-4mm; အမြင့်ကုန်းပတ်ထူ: ၃၀ မီလီမီတာ။
Premium ပစ္စည်းများတည်ဆောက်ခြင်းသည်နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ကြာရှည်ခံ။ အားကိုးနိုင်သည်။
SKU: 2321400 Categories: ရေချိုးခန်း Faucets, ရေချိုးခန်း Faucets နှစ်ဆကိုင်တွယ်ပါ Tags:2ကိုင်တွယ်,4လက်မ, brushed နီကယ်
12.17 x ကို 8.78 x ကို 3.07 လက်မ
ရေအေး / ရေပူ
ရေချိုးခန်း faucet / ယိုစီးမှုပေါ်လာပါ
တစ်ဦးက *** r2020-04-05
ပထမတော့ကျွန်မအသက် ၈၀ ရှိပါပြီ။ စီမံကိန်း၏အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းမှာ faucets ဟောင်းများကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ WOWOW faucets အသစ်များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအလုပ်အတွက်လိုအပ်သောအရာအားလုံးပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်အလုပ်ကို DIY's အတွက်အလွန်လွယ်ကူစေသည်။ ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်အရမ်းအကြံပြုလိုပါတယ်
S က *** ဃ2020-05-01
စျေးနှုန်းအတွက်အလွန်ကြည့်ကောင်းပါတယ် ငါအမှတ်တံဆိပ်အမည်ကိုမမြင်ရစေခြင်းငှါအလိုရှိ၏, ဒါပေမယ့်ဒါဟာကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါဘူး။ Brushed nickel သည်အခြားကျွန်ုပ်ရှိသည်သော brushed nickel ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အဆိုပါတပ်ဆင်ရိုးရှင်းခဲ့အပေါင်းတို့နှင့်အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။
အီး *** င2020-05-06
တော်တော်ရိုးရှင်း install လုပ်ပါ။ လက်ကိုင်အလွန်ချောချောမွေ့မွေ့ရွှေ့, တကယ်ကောင်းတဲ့ကြည့်ရှုသည်။ ငါနှစ်သက်သော faucet သို့တိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲ (စလက်) အဝတ်လျှော်အဝတ်လျှော်, သုတ်ဆေးတံစသည်တို့အတွက်အနည်းငယ်ပိုအခန်းခွင့်ပြုနှင့်အတူ faucet အပေါ်မြင့်မားသော Arch ကြောင့်ပိုလျှံရှင်းလင်းရေးနှင့်အတူ; ဆိုလိုသည်မှာရေထွက်လာသည့်နေရာနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အရာအနည်းငယ်သာရှိခြင်း၊
တစ်ဦးက *** ဎ2020-05-16
ငါအိမ်မှာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစတိုးဆိုင်အနည်းငယ်မှာ faucets အပေါ်စမ်းသပ်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်နှင့်ဤ faucet အလွန်စျေးကြီးတဲ့သူတွေထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ခံရဖို့ပုံရသည်ဟုပြောရမည် ငါအံ့သြသွားတယ် ၎င်းသည်အလွန်လေးလံပြီးအဆို့ရှင်များသည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖွင့်ပြီးကောင်းမွန်သောခံစားမှုဖြင့်လည်းနီးကပ်သည်။ ငါအရမ်းဝေးအထင်ကြီးမိပါတယ်။ ငါမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာဤအနည်းငယ်အနည်းငယ်အစုံဝယ်ယူပါလိမ့်မယ်။
B က *** ဂရမ်2020-05-20
ffordable စတိုင်, ကောင်းစွာလုပ် faucet ။ တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးသင်လိုအပ်ပါကညွှန်ကြားချက်များပင်ရရှိသည်။ ငါ့အိမ်ရှိအခြားရေချိုးခန်းဆေးသုတ်ဆေးများကိုအစားထိုးရန်မှာယူရန်ကျွန်ုပ်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းကျိန်းသေတန်ဖိုးရှိ။ စျေးကြီးတဲ့ faucets တွေလိုပေမယ့်စျေးသိပ်မကြီးပေမယ့် faucet ဆောက်လုပ်ရေးကိုသူတို့မစွန့်လွှတ်ခဲ့ကြပါ။
Z ကို *** င2020-05-24
အဆိုပါ faucet အကြီးလှပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အခြားရေချိုးခန်းအတွက်ဒုတိယတစ်ခုထပ်မှာမှာပါ ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့ငါ faucet ကိုချစ်ပြီးယခုအသစ်သောယိုစီးမှုနှင့်အတူ, ငါပျော်ရွှင်စွာဒီထုတ်ကုန် FIVE ကြယ်များကိုပေးပါ။
L ကို *** မီတာ2020-05-29
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေချိုးခန်းဟောင်းကိုအစားထိုးရန်ဤရေချိုးခန်းမျက်နှာပြင်ကို ၀ ယ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးအလွန်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းကြောင့်သန့်ရှင်းစွာထားရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ကျနော်တို့ဒီ Bracet Silver နဲ့ဝယ်လိုက်တယ်၊ ဒီအသွင်အပြင်ကငါတို့ရေချိုးခန်းထဲမှာတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းနေတယ်။
S က *** y က2020-06-03
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကအိမ်တအိမ်ဝယ်ပြီး faucets အစားထိုးဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ဤဝယ်ယူခြင်းနှင့်ကပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါလိုအပ်သမျှနှင့်အတူလာကြ၏။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးအလွန်ချောမွေ့ကြည့်ရှုသည်။
ကို C *** s ကို2020-06-03
ငါဘာပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါဒီ faucet ကိုနှစ်သက်တယ်။ ဤသုံးသပ်ချက်သည်ကျွန်ုပ်၏တတိယအဆင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ငါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကပထမတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တယ်၊ ဒါကအစိုင်အခဲခိုင်မာနေတုန်းပဲ၊ အိမ်ထဲမှာကလေးတွေနဲ့ပါ။ ဒါဟာအရမ်းကောင်းကောင်းတက်တဲ့အတွက်ငါဒုတိယတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တယ်။ ငါရေချိုးခန်းမာတဲ့စုပ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်ဒီ faucet ငါ့အဘို့ဤမျှလောက်ကောင်းသောကြောင့်စျေးကြီးကြည့်, ငါကအတူကပ်ပါစေတွက်ဆ! ထိုအခါငါလုပ်ခဲ့တယ်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်စတုတ္ထစုပ်လျှင်ကျွန်ုပ်ထပ်မံဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။
မေး *** ဎ2020-06-13
အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့နှင့်ယူနစ်perfectlyုံအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာနှစ် ၂၀ သက်တမ်းရှိပြီးတစ်ခုတည်းသောလီဗာ၊ အဆိုပါပိတ်ပစ်သမျှကိုမျှယိုနှင့်အတူအလွန်ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းအတွက်၊ ဒီ faucets တွေ ၀ ယ်တာကိုဘယ်လိုဆုံးရှုံးမလဲဆိုတာငါမသိဘူး။
W *** y က2020-06-13
ငါဒီရေချိုးခန်း faucet ၏ဝယ်ယူနှင့်အတူအတော်လေးပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ အရည်အသွေးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်တပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ သူကအရမ်းကြည့်ကောင်းနေပြီးကျွန်တော့်ရေချိုးခန်းထဲရှိအခြားဘရိတ်နီကယ်လ်တာနှင့်လိုက်ဖက်ညီသည်။ ဒီ faucet သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံမှားသံသယမရှိပါ။
J ကို *** ဃ2020-06-14
Petite နှင့်အလုပ်လုပ်သောရေချိုးခန်း faucet ။
အို *** y က2020-06-13
စာသားအရသင်သည်သင်၏လက်နှင့်ညှိနိုင်သောလိမ်ဖဲ့ခြင်းသာလိုအပ်သည်။ ရေပိုက်ပြင်စက်များနှင့်တိပ်ခွေများလုံးဝမလိုအပ်ပါ။ ကြည့်ရတာလှပပြီးကြည့်ကောင်းပါတယ်
F ကို *** ဌ2020-06-14
Nice faucets, ကြီးသောကြည့်။ ငါလက်ငင်းတစ်ခုတည်းယိုစိမ့်မသေချာဖြစ်သကဲ့သို့ပူ / အအေးများအတွက်သီးခြားလက်ကိုင်ချင်တယ်။ ဒီနည်းနဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုသေချာစွာသေချာအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်။ အဆင်ပြေပါတယ် လက်ကိုင်သည်လေပြေကဲ့သို့လှည့်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ရေစုပ်စက်ကိုုံပေးပါ ထိုသူတို့လျောက်ပတ်သောစျေးနှုန်းခဲ့ကြသည်။ နှစ်ယောက်ဝယ်ခဲ့တယ်
: P *** ဎ2020-06-15
ရေချိုးခန်းတစ်ခုစီအတွက်နှစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်။ လှတယ် ကြည့်ကောင်းတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ humidifier ကိုဖြည့်ရန်အတွက် faucet သည်မည်မျှမြင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်သည်။
ဤသည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စျေးနှုန်းမှာအလွန်ကြီးစွာသော faucet ပါ! ငါ့အဖေ 30 faucets လုပ်ဖို့မိနစ်2ခန့်။ ငါတို့ guest ည့်သည်ရေချိုးဖို့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲငါမှာထားတယ်၊ ကျမယောက်ျားကိုအစားထိုးဖို့စောင့်နေတုန်းပဲ။ ငါတို့မှာပြnoနာမရှိဘူး။ ငါ Pop up ယိုစီးမှုကိုချစ်!
ကို C *** w2020-06-25
သူတို့ကတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းတယ်၊ စျေးကလည်းကောင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိနစ်မြုပ်မှုအားလုံးကို (စုစုပေါင်း ၈) ဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဒါဟာတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်လိုယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လုပ်နေတာကိုလုပ်ရတာလွယ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်နီကယ်ဖြစ်ပြီးလျပ်စစ်ဓာတ်၏အရည်အသွေးမှာလည်းလျောက်ပတ်သောအဆို့ပါရှိသည်။
ဒီ faucet ဟာအလွန်ကောင်းပါတယ် ၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားပြီးတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးကောင်းစွာလည်ပတ်စေသည်။ Pop-drain ဒီဇိုင်းသည်ယခင်ပုံစံဟောင်းရေနုတ်မြောင်းများထက်ထည့်သွင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ငါတစ်အိမ်လုံးအဘို့အနည်းငယ်ပိုရမယ့်တာပါ။
B က *** s ကို2020-07-03
တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ကြည့်ကောင်းတယ် ဖန်စီမရှိပေမယ့်ချောချောမွေ့မွေ့ကြည့်ရှုသည်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
R ကို *** s ကို2020-07-06
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ငှားအိမ်အတွက်ဒီရေပိုက်ကို ၀ ယ်ပြီးသားကိုထည့်လိုက်တယ်။ သူဟာဘယ်တုန်းကမှ faucet install မလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ထိုအဖို့အကြီးလှပါတယ်။
အီး *** y က2020-07-09
ဤရွေ့ကားကောင်းတဲ့ faucets နှင့်တကယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏ရေချိုးခန်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေပါက၎င်းတို့သည်သိပ်မထူးဆန်းပါ၊ သို့သော်အလွန်ကောင်းသောတန်ဖိုးဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်မဟုတ်တော်တော်ကြာရှည်စွာပုံရသည်နှင့်တကယ်ကောင်းသောအလုပ်ဖြစ်တယ်
R ကို *** s ကို2020-07-10
ငါတို့ရဲ့ရေချိုးခန်းထပ်တိုးရင်ငါပေးဆပ်ရမယ့်အရာကိုစဉ်းစားမိတယ်။ ငါပေးဆပ်ရန်ထက်လမ်းပိုမိုတယ်။ တကယ်တော့သူကကြည့်ပြီးကြည့်ရတာငါဟာအဓိကရေချိုးခန်းအတွက် ၀ ယ်ထားတဲ့စျေးကြီးတဲ့နာမည်တံဆိပ်နဲ့တူတယ်။ အရမ်းသဘောကျ ငါတစ်ခုခုမှမလိုအပ်ရင်အချိန်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်အရည်အသွေးကနေအကဲဖြတ်, နောက်တဖန်ထံမှဝယ်ပါလိမ့်မယ်။
အို *** r2020-07-12
F ကို *** t ကို2020-07-13
ငါတို့ရေချိုးခန်းတွေထဲမှာ faucets တွေအစားထိုးလိုက်ပြီ။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ local hardware store မှဝယ်လိုက်သောပထမထက်များစွာပိုလွယ်သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာရေချိုးခန်း faucet များအတွက်ကြီးသောအမြင့်။
T က *** င2020-07-15
ကျွန်မခင်ပွန်းကဒီဟာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်သွင်းလိုက်တယ်၊ အခက်ခဲဆုံးကဟောင်းနွမ်းသူတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာပဲ။ သူတို့ဟာကောင်းပြီးလေးလံသောသတ္တုတွေဖြစ်ကြတယ်။ အဆိုပါလက်ကိုင်အနည်းငယ်သေးငယ်ပေမယ့် faucet ၏အမြင့်ကတက်စေသည်။ သင်၏မျက်နှာကိုနစ်မြုပ်စေရန်မလိုဘဲနစ်မြုပ်နိုင်သည့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယောက်ျားလေးများအတွက်ရေချိုးခန်းတစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကိုကြိုက်တယ်၊ ငါတို့သခင်အတွက်နှစ်ယောက်ဝယ်ခဲ့တယ်။
H ကို *** ဃ2020-07-16
ဤသည်အလွန်ကောင်းစွာလုပ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါသည်, ငါအမြဲတမ်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမပြုကြပေမယ့်ဒီထုတ်ကုန်ခြွင်းချက်သွားသဖြင့်အသစ်သောခိုင်ခံ့သောရေပိုက်ပါရှိသည်သော faucet ။ ဤသည်မမျှော်လင့်ဘဲနှင့်အလွန်တန်ဖိုးထားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးယိုစိမ့်ခြင်းမရှိပေ။